Cilmaani Made In Soomaaliya ah . W/Q Mahdi Muse | RBC Radio
Cilmaani Made In Soomaaliya ah . W/Q Mahdi Muse
Posted on April 26, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Cilmaani Made In Soomaaliya ah
Waa la filayay muuqaalka cilmaani, oo aan magaca Soomaali wadaagno. waxaanse sugeynay Cilmaani Galbeedka wax ku soo bartay, oo leh aqoon dheeer , haddana si fiican loo soo diyaariyay, laga soo bilaabo dugsiga Hoose ilaa Shahaadada u sareysa ee PHD.
waxaa filan waa ah, in aan aragno Soomaali Cilmaaniya ku dhawaaqaya, haddana gudaha Soomaaliya ku dhashay, waxna ku bartay, lagana yaabo qaarkood in aysan waxbarasho hoose nasiib u yeelan, maxaa yeeelay tuulada Bari dhacda, ee uu ku koray Cilmaaniga maanta, ma laheyn Dugsi Hose & mid dhexe toona. Qur,aanka uu xafidsan yahay darteed , ayaaa loogu qiimeeyay heerka waxbarasho ee Dugsiga sare. Waa yaaab..!! Cilmaani Qur,aanka ku takhasusay, haddana abaal gud ku helay..!!! waa Cilmaaniyada maryoleey ee ah Made in Soomaaliya.
Cilmaaniga Galbeedka lagu soo diyaariyay, sida Jamacadaha Oxford & Sorbonne. waxuu tiigsadaa Siyaasada & diinta. waxuuna abbaaraa kala sooca Diinta & Dowladda, haddana dagaal uma qabo muqadasaadka Diinta & falgalka Cibaado ee bulshadiisa. waad aragteen Sawirkii baahay ee kulmiyay Madaxda Reer Galbeedka & Qaddiisinta Kaniisada Roma. ugu yaraan waxuu tusay in Madaxdu ay Diinta & Culumaduba tixgalin u hayaaan. Ogoow yaab maleh. waa Cilmaaniyada dhabta ah ee Yurub taala, waana Made In France. ha moodin teeena ah Made In Soomaaliya.
Yaab waxaa ah, in Cilmaaniga wax ku soo dhigtay Jamaacadaha Islaamiga ee Sacuudiga & Sudan, uu xoogga saaro fikir waxuu ugu magac daray, laakin xad-gudub ku ah Muqadasaadka Bulsahda, asagoo waliba Quud -dareynaya in uu sidaa ku noqdo nin door Bulshada wax taray, haddana fikrad soo kordhiyay. Haddaad arintan ka yaabto, ogooow kaligaa ma,ahan. Soomalida maqashay warka Cilmaaniyada Cusub oo dhan ayaa sidan u yaabtay, walina u yaaban, Waase Cilmaaniyada ay dabeecada Soomaalidu sameysay, taa oo ah Made In Somaaliya.
Calanka Cilmaaniyadu waxuu taagnaa bartamihii Qarnigii tagay, wadamada Islaamka sida Masar, Tunis, Aljeriya & wadamada dhaca Bariga dhexe qaarkood ayeey Cilmaaniyadu si fiican ugu faaftay. Daneynta Tacliinta & Kobcinta garaadka qofka, ayaa ah wanaaaga kaliya ee laga sheego Cilmaaniyada wadamadaa. sida muuqata,Cilmaaniyada gayigeena ka dhalatay kuma bilaaabin manhaj bar-baarin oo bulshada ku wajahan. Waa laab-lakac, rag iska dhici & ha lagu arko u badan. inta badan qalinkooda waxaad ka dheehan kartaa xanaaq, aan xitiraam & anshax toona laheyn.
Waana hubaal haddii qalinka ay uga talaabaan qoriga in dhiig badan uu daadanayo. Soomaali waa Soomaali. Cilmaanigiisu waa dagaal, Wadaadka Diinta ku xadgudbayna waa dagaal. kii xataa dhex-dhexaad noqodayna waa ku kaligii xaqa, Naar & Kufri waxaa u dhaxeeya in asaga bes la raaco. Intuba waa dhaqan Soomaali, waana Made In Soomaaaliya.
Cilmaaniyada ka jirta wadamada Islaamka, waxay joogtaa marxalad dhameystir ku dhaw, inta ku qanacday & inta diidayba waa wada nool yihiin, Laaakin Cilmaaniyada Soomaaliya waa bilooow, ku suntan asluuub dagaal oo ay la galayaan Culumada, Bulshada & aqoonyahanka. arintan oo cimri deg-deg dhigeysa Cilmaaniyada Koobiga ah ee Soomaaliya lagu sameeyay, taa oo huwan dhaqanka Soomaali ee Fudeydka & Xad-gudubka la mataanka ah. Allooow Cilmaaniyada nooocan ah Dalka & Dadka dhinac ka mari .
W/Q Mahdi Muse